သဘောကျမိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » သဘောကျမိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ
Posted by အာဂ on Oct 11, 2010 in Cultures, Photography | 20 comments
အရမ်း သဘောကျမိတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ ပါ ။ လမ်းဘေးမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ့နဲ့ ထမင်းချက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးလား ၊မြေးလားမသိတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ဘာသာရေး ကြည်ညိုကိုင်းရှိင်းမှု ပုံရိပ်လေးပါ။ ကလေးလေးက ပုံမှာ ကြည့်ရတာ အသက်တော်တော်ငယ်သေးတဲ့ပုံပါပဲ။ ဦးဇင်းကြီးရဲ့ အကြည့် ကလည်း ပိတီတွေ နဲ့ အသက်ဝင်လှပါတယ်။ ဘေးကအဒေါ်ကြီးက လည်း သူကလေးရဲ့ လိမ္မာရေးခြားရှိမှု ကိုကြည့် ပြီး ပိတီဖြစ်နေပုံပါပဲ..။ နောက်တွေးမိတာက ဒီလိုလူမမယ်ကလေးတောင် သံဃာတော် ကိုရိုသေလေးစား ရမှန်းသိပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတွေက မသိပဲ သံဃာတွေကို ပြီးခဲ့ တဲ့ အရေးအခင်းမှာ ရိုက်နှက်သတ်ပုတ် ကိုယှဉ်ကြည့်ပြီး ဒေါသထွက်ရပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ မည်သူရိုက်ထားသည့်ပုံလည်းတော့မသိပါ။ ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင် အနေဖြင့် ခွင့်လွတ်နားလည်လိမ့်မည်ဟုလည်း ယူဆမိပါသည်။
တစ်ချို့က ဘာသာရေးကို ကလေးလောက်တောင် မသိတတ်ကြပါဘူး ။ ကလေးလောက်မှ အသိတရား မရှိကြရင်တော့…
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်လေးပါလားဗျို့ …
ပုံထဲမှာပါတဲ့ သုံးဦးစလုံးကို သေချာကြည့်လေ ….ကြည်နူးမိလေပါပဲ
ကိုအာဂရယ် သေသေချာချာလည်းကြည့်ပါအုံး။ ထမင်းချက်နေတဲ့ မိန်းမက အဘွားလို့ရေးရလောက်အောင် အသက်မကြီးသေးပါဘူး။ သူ့ခင်ဗျာ ဓာတ်ပုံလည်း အရိုက်ခံရသေး၊ အဘွားကြီးလို့လည်း အခေါ်ခံရသေးတယ်။ တော်တော်ရက်စက်တဲ့လူပဲ။
ကိုကြောင်ကြီးကလည်း ဗျာ..။ မြန်မာပြည်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ
ပြီး အဲဒီအရွယ်ဆိုရင် အဖွားဖြစ်နေကျတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေဗျာ..။ ကိုကြောင်တောင်မှ….မြေးတွေဘာတွေရနေပြီဟာကို။
ကလေးကမမှီတမှီနဲ့ သင်္ကန်းသွားမဆွဲတာတော်သေးတာပေါ့ ။
ကလေးတောင်ဘုန်းကြီးမြင်ရင်ဘာလုပ်ရမှန်းသိတယ် ဟိုငထူတွေအခုထိဘာကြောင့်မသိပါလိမ့် .. ။
အရမ်းကိုသဘောကျမိတယ်ဗျာ…ကြည့်နေရင်းနဲ့ပီတိဖြစ်စေတယ်…R Ga ရေ ကျေးဇူးပါ…
ဦး R Ga ရေ နောက်ကအမျိုးသမီးကကလေးအမေဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ။ သူ့ ပါးစပ်ကတစ်ခုခုပြောနေတယ်လို့ မထင်ဘူးလား။ သားတို့ မြန်မာပြည်ကကလေးတော်တော်များများကို ကလေးဘ၀မှာ သင်လေ့ရှိကြတဲ့ ဦးတော်ဦးတော် ဆိုပြီးပြောနေတာလို့ သားထင်တယ်။ ဦး ရောဘယ်လိုထင်လဲ။
အဟား..အဟား blackchaw လုပ်မှပဲ..ကျွန်တော်လည်း အသက်တော်တော်ကြီးနေ ပြီလားလို့ပြန်ပြန်တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း blackchawပြောသလိုပဲ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးက သူဖာသာသူရှိခိုးနေတာလို့လည်းထင်မိတယ်။
သူအမေ(အဖွား)( အင်း အဒေါ်ပါထည့်မှပဲ) နဲ့ ကလေးနဲ့ ကတော် တော်လှမ်းနေတယ်။
အရမ်းအရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးပါဗျာ…….ရိုက်တဲ့လူကော် တင်တဲ့လူကော် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..ကလေးလောက်တောင် ခင်များတို့ ကျွန်တော်တို့ ဘုရား တရား သံဃာ ကိုသိတတ်ရိုသေ ကြပါရဲ့လား………လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်မေးမိပါတယ်….
ပုံကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးမိပါသည် ပုံလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဓာတ်ပုံလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ကြည့်မိတဲ့သူရဲ့ စိတ်ကို စွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ..
အရမ်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပါဘဲခင်ဗျာ…..ကြည်နူးပီတိလဲဖြစ်မိပါတယ်……ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သားအမိ ဒါမှမဟုတ် မြေးအဖွား နှစ်ယောက်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုကိုပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ …ဓာတ်ပုံပညာရှင်နှင့် ဒီ post ကို တင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုအာဃကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်….
ဓာတ်ပုံလေးကို အရမ်းသဘောကျ ခံစားရလို့ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်…ခင်ဗျာ…… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စနက်ရှော့လား ခရီရေးတစ်လားတော့ မသိဘူး
မြင်ကွင်းက ရှင်းရှင်းကြီးနဲ့ ထင်းနေတာပဲ
ကြည့်ပီးတာနဲ့ ဘာပြောရမလဲဆိုတာ တန်းသိတယ် … ဟဲဟဲ ;)
ပုံထဲက နေရာကို ခန့် မှန်းကြည့်တာ
ဦးပိန်တံတား အရှေ့ ဘက် က ဆီမီးထွန်း ရွာနားလား ဗျ
ဒီပုံလေးက အတော်လေးအသက်ဝင်ပြီး…ဓါတ်ပုံဆရာကလည်း အမှတ်တမဲ့ရိုက်ထားတဲ့ သဘာဝပုံလေးလို့မြင်ပါတယ်…
ကျနော့်အတွေးမှာတော့…မိခင်က သမီးလေး… ဘုန်းဘုန်းကို ဦးတော်လုပ်လိုက်….ဆိုလို ခလေးက လက်အုတ်ချီနေတာလို့ထင်တယ်…(.အဆုံးအမကိုနားလည်တဲ့ ခလေးငယ်)…
ထိုအတူ…ရိုက်ဟေ့..ရိုက်..ရိုက်..ညာသံပေးလို့ ရိုက်ရသူ..(သူလည်း အဆုံးအမ ကိုနားလည်တာပဲ)…
ခိုင်းတာကို လုပ်တာပဲ…ဒါပေမယ့်…ခိုင်းတဲ့ ပုံစံချင်းမတူ…အုပ်ထိန်းသူရဲ့ ခိုင်းစေချက်မှာ မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ချင်း မတူညီတော့ပါ။